Ma Ilaah bay caabudaan mise Zenaawi?
Ilaah baa mahad leh nabadgalyo iyo naxariisna Nabi Maxamed korkiisa ha ahaato.
Waxaan aad uga xanuunsanayaa in dalkeygii uu gumeysi ku jiro dadkeygiina xasuuq laggu hayo, waxaa intaan aduunka ku noolaa igu naxtin badnayd maanlintii dalkeygii la qabsaday ee cadow ka soo duulay Addisa Ababa la wareegay caasimadii Soomaaliya ee Muqdisho. Balse waxaa iiga sii darneyd markii aan daawaday cajalad laga soo duubay xasuuqii loo geystay shacabakeena, oo kumanaan meydad ah la iskor saaray siddii raashiin la rarayo oo kale oo meydadka qaarkoodna ay dildilaaceenba.
Waxaa taa ka sii darnaa markii ciidamada kufaarta ee tigreega ah ay ku dabaal degayeen xaruntii hore gaadiidka ee xaafadda Xamar jabjab, horay ayay Soomaalidu ugu maahmaahday “Cimrigaaga oo raagga geel dhalayo ayuu ku tusaa”, miyaanse moodayay iney tani ii harsan tahay, midba middaa kasii daran, tanna waa tan iigu dhalisay ama igu xambaartay inaan maqaalkan ka qoro. Markii aan Universal TV ka daawaday dhibaatadii ay kufaarta Tigreega u geysteen masaajidyada oo ah inay ku saxaroodeen meelwalba masaajidka kamida kitaabadiina ku tunteen, isku soo duuduubo dhamaan intaan kor kusoo xusay iyo inkale oo farabadan oon halkan lagu soo koobi karin waxaa na baday dabadhilifyada u shaqeeya kufaarta Tigreega iyo gaalada kasoo duushay Itoobiya sanad ka hor.
Kaafirka Zenaawi oo muddo ku noolaa Soomaaliya ayaa weligiiba ku hamiyi jiray inuu qabsado gayi’geena oo ilaa iyo 17dii sano ee lasoo dhaafay ku howlanaa kala qayb qaybinta shacabka Soomaaliyeed wuxuuna adeegsan jiray dabadhilifyadiisa loo yaqaan hogaamiye kooxeedyo oo ah kuwa ugu liito dadkeena, kadib markii shacabka kacdoomay ee iska eryey dabadhilifyadii Zenaawi; markaa kadibna ay samaysteen maamul islaami ah oo nabad kusoo dabaalay dhamaan gobollada koonfurta Soomaaliya ayay lama huraan u noqotay dowlada Maraykanka iyo Zenaawi inay kusoo duulaan wadankeena si loo baabi’iyo maamulka Isbahaysiga maxkamadaha islaamka oo waqti yar dhisnaa.
Dabadhilifyada Zenaawi oo marnaba mugdi inoogu jirin inay caabudaan kaafirka Zenaawi, taasi waxaa tusaale inoo ah qof walba oo jago sare loo magacaabo intaan la dhaarin wuxuu aadaa Addis Ababa si uu ugu soo sujuudo Zenaawi. Waxaa xaqiiqo ah dabadhilifiyada gumaysiga usoo horseeday gayi’gayaga markay la kulmayaan mas’uuliyiinta maamulka Tigreega inay si sujuud ahaan u salaamaan, waxaa kaloo cadayn inoo ah inay caabudaan Zenaawi markii dadkooda oo la xasuuqayo iyo masaajidyadii oo ihaano loo geysnayo aysan ka damqan kari waayeen kana jiriricoon waayeen miyeysan taa inoogu filnayn inay caabudaan kaafirka wayn ee Zenaawi, mise waxbaa inoo harsan……?
Markii ay hadlayaana waxay yiraahdaan waxaan la dagaalameynaa Islaamiyiinta tasoo macnaheedu lamid tahay ineysan iyagu islaam ahayn aysana caabudin Ilaahay (SW). Waxaan u soo jeedinayaa suxufiyiinta Soomaaliyeed iney si taxadir ah iskaga ilaaliyaan marka ay aqrinayaan, qorayaan amaba soo tebinayaan wararka ereyada qaarkood ee ay ka mid yihiin Islaamiyiinta IWM. taasoo micnaheeda noqon karta weriyaha warka akhrinayo ama qoraya inuusan aheyn qof Islaam ah.
Horaa dabadhilifyada waxaa ugu fidyooday culumada Soomaalida ugu waaweyn kuna tilmaamay murtadiin, marka haddii aanu sidaa ogaanay maahan inaan waqti ku lumino ama ku mushquulno murtadiintaan caabuda Zenaawi.
Haddaba haddii xaalku sidaa uu yahay Maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed?
Aragtidaydu waxay tahay waa sidan:
Waa inaan mideynayaa xoogageena oo idil taasoo inoo noqonayso laf dhabarka guusha, sidaan la soco islaamka wax badan ayuu ka hadlay midnimada uuna inooga digay tafaraaruqa sida aayadan inoo cadeynaysa “Qabsada xariga ilaahay idinkoo wada jiro, hana kala tafaraaruqina”.
Waa inaan u dagaalanaa ilaahay dartii si aan u difaacno dalkeena iyo dadkeena aysan ku jirin ujeedo kale oo ka dambaysa, si daacadnimo ahna ay ku dheehan tahay aanan sugina inaan ku helno jago ama hanti badan.
Waa inaanu ku sabirnaa dhibkasta oo naga soo gaaro jihaadka aan kula jirno gaalada nagu soo duushay waayo sida ay aayad quraan ah noo sheegayso “In gaaladu laftooda uu xanuunka gaarayo mid lamid ah kan idinka idiin gaarayo, walowse aad idinku dheer tihiin rajo aad ilaahay xaggiisa ka sugaysaan iyaguse aysan waxba sugaynin”.
Waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa 3dan qodob ee aan kor kusoo xusay oo ay muhiim u tahay u dagaalanka xaqqa, sidaanu la socono gaaladu markaad dusha ka fiirisid waxay u muuqdaan kuwo midaysan laakiinse aysan ahayn kuwo midaysan oo shakhsi walba leeyahay dan gooni ah; mana laha sabir ama adkaysi ay ku adkaystaan markuu dhibka ku dhaco. Sida runta maalmihii lasoo dhaafay guushu way soo bidhaamaysay cadowguna wuu jabayay (Ninkii dalka dhoof ku yimidaa geeridu dhibaysaa), taana waxay ku timid shacabka oo gacmaha is qabsaday. Waxaana inagu haboon inaanu is xisaabino qof walboo maxaad gacan ka gaysatay taariiqduna way qori doontaa Ilaahayna raali ayuu inoogu noqonayaa.
Marka walaalayaal waxaa inoo balan ah inaan xaqa u dirirnaa inshalah.
Waxaa qoray C/qaadir Axmed Muumin (Gaduudow)